Nje Virus na njem nlegharị anya na Hawaii | Akụkọ Njem njem Hawaii
Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Nje Virus na njem nlegharị anya na Hawaii
Delta Virus nke COVID-19 na-eto na Hawaii n'etiti ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi, ndị njem na-arịwanye elu na ndị ọbịa na-abata. Ọ dịghị onye yiri ka enwe nchegbu ma e wezụga Hawaii Tourism Authority na-agbalịsi ike ịgba naanị ndị na-emefu ego ka ha tụlee Aloha Steeti maka ezumike.
59.1% nke ndị bi na Hawaii na-agbatị ọgwụ mgbochi zuru oke, otu n'ime ọnụego kachasị elu na United States.
N'agbanyeghị nsogbu 164 ọhụrụ nke COVID-19 na ụlọ ọgwụ ọhụrụ 7 ka edere na Friday. Emezigharịrị ndị mmadụ ọgwụ mgbochi, nke a bụ otu n'ime ọnụọgụgụ ụbọchị kachasị elu edere kemgbe ntiwapụ nke nje ahụ.
Enwere ndị ọbịa karịa na Hawaii karịa na 2019, na Hawaii na ndị ọzọ nke United States ka emechibidoro ndị ọbịa mba ụwa.
Bọchị kachasị njọ kemgbe ọrịa a malitere bụ August 27, 2020, na-enwe 371 kwa ụbọchị ọhụụ. Mgbe Hawaii gachara, ihe ndị a chọrọ iji zuru ike maka ndị njem nlegharị anya na anụ ụlọ site na mba USA mbụ na Ọktoba 2020, ọnụọgụ ọrịa kwa ụbọchị ka dịkarịrị ala na United States na-eleta ihe dị ka 40-60 kwa ụbọchị.
Kemgbe July 8, 2021, ndị ọbịa na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke agaghịzi echegbu onwe ha banyere ịnye nyocha PCR na-adịghị mma iji zere iche iche ụbọchị 10, yana karịa ndị 30,000 bịarutere ụbọchị ọ na-egosi.
Enwere ndị ọbịa ndị ọzọ na Hawaii ugbu a ma e jiri ya tụnyere 2019. Hawaii na ndị ọzọ nke United States ka emechibidoro ndị ọbịa mba ụwa. Ndị Japan, ndị Korea, ndị Canada, ndị Australia, na ndị China na-abụkarị akụkụ dị mkpa nke ndị ọbịa na-agụ na Hawaii, mana ha anaghị eleta. Nlegharị anya nke ụlọ na-ewere ọnọdụ na ndị ọzọ.
Mmụba nke njem bụ ezigbo akụkọ maka akụ na ụba dabere na njem na steeti, yana ụlọ oriri na ọ fullụ fullụ zuru oke, ogologo oge na-eri n'ụlọ nri, ebe ịzụ ahịa juru, na enweghị akwa nhicha n'ọtụtụ osimiri.
Izu gara aga kwesịrị ịkpalite ịkpọ oku maka ndị na-eche na nje ahụ bụzi akụkọ ihe mere eme na Aloha Steeti. Gụta ndị mmadụ ọgwụ mgbochi zuru oke nke anaghị enweta nje ahụ, ọ bụzi nje n'etiti ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi. Inweta echiche na ọrịa nje na-akọrọ naanị 40% nke ndị bi, today ohuru ohuru bụ otu n'ime ndị kasị elu e dere na State.
N'oge gara aga, ọ gaara eme ka mkpọchi zuru ezu. Taa, ọ fọrọ nke nta ka ọ dị onye ọ bụla na-echegbu onwe ya, ebe a na-a barsụ mmanya na ebe ndị njem ndị ọzọ dịkwa.
Ọtụtụ n'ime okwu ọhụrụ ndị a metụtara ugboro 10 ọzọ na-efe efe Delta dị iche iche. Ndị ọchịchị yiri ka ọ dị jụụ na ndị njem nleta na-abata na ndekọ ọnụ ọgụgụ kwa ụbọchị.
Hawaii Lt. Gọvanọ Green gwara otu akwụkwọ akụkọ mpaghara, ọnụọgụ ndị a nwere ike ịpụta site na emume ụbọchị anọ nke ọnwa asaa nke US US ga-agbadata n'izu a.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ọfịs ndị njem na ụwa na-agbasi mbọ ike ịchọta ụzọ iji kwalite njem nleta na ebe ha na-aga, Ndị njem nleta Hawaii na-eme ihe dị iche, na-anwa ịchọta ụzọ iji mee ka ndị ọbịa ghara ịbịa Hawaii.
Itinye ego maka osimiri, na-ekwu maka ụgwọ ịgbago na-abawanye iji mee ka ụgbọ elu na-abịa, belata mgbasa ozi niile, na-akatọ ndị njem nleta na ịkpa oke maka ndị njem nleta. eTurboNews abụwo Modus Operandi kemgbe nwa afọ HTA Chief John de Fries bụ onye isi obodo na-eduga ụlọ ọrụ kachasị na Steeti, njem.
Maui Mayor Mike Victorino mere n'oge na-adịbeghị anya akụkọ mba mgbe ọ gwara ndị ọrụ ụgbọ elu ka ha kwụsị ọrụ ha na Kahului, Maui, nke na-agbasi mbọ ike imeziwanyewanyewanye njem ndị njem na obere ihe.
Ndị otu mkparịta ụka nọ na mpaghara na -ekere òkè n'ụjọ maka ndị ọbịa enweghị nsọpụrụ ide mmiri na-asọba dịka mpaghara Northshore na Oahu ma ọ bụ Kailua. Onye njem nleta na-emetụ akara mọnk dị egwu na Northshore mere akụkọ mba na ịdọ aka ná ntị siri ike nye ndị njem nleta ịkwanyere Omenala Hawaii ùgwù site n'aka Gọvanọ Hawaii Gọọmenti Ige.
Hawaiian ụgbọ na-abịa site na nsogbu dị ike ma dị mma.